Abesotho bazonwabisa ngengoma nangomxhentso, kwimicimbi neziyunguma zabo. Ingoma isetyenziswa ukuvakalisa ukudakumbiswa kokumka kwamadoda aye kusebenza ezidolophini ezikude namakhaya: amadoda akhuphisana ngokucula iingoma zabahambi (lifela tsa litsamaea naha).
Ezi ngoma zibalisa ngempilo yase hostela zase zimayini, naphantsi komhlaba. Abafazi bona bacula ngalendlela inye ukuvakalisa izilillo zabo njengabafazi abanabayeni abafe bethwele iminqwazi.
Eyona mixhentso ixhaphakileyo yi mokorotlo, imohobelo kunye ne mokhibo. Imokorotlo ngumxhentso owenziwa ngamadoda, exhentsela inkosi ngamaxesha akhethekileyo, afana nentlanganiso zeze politiki, okanye xa inkosi kunye nabalandeli bayo besiya kuhambo lokuhlola.
Lomxhentso wenziwa ngokutyityimba ngesingqi esinye kuyiwe ngaphambili nanga semva, kube kuthiwe chuu kungqishwa phantsi ngonyawo. Umhlabeleli ucula ngelizwi elitswinayo, nelithi lilandelwe ngumngqokolo wabanye abakweliqela. Omnye wala madoda uye amane ephuma kweli qela atsiba tsibe phambi kwenkosi, elinganisa ukuhlasela kwasemfazweni.
Uye akhuthazwe nangabanye nabathi bayeke ukucula baze bambize ngegama lakhe lomxhentso. Usenokuzithutha okanye athuthe inkosi ngeziduko zayo. Uye aphinde abuyele endaweni yakhe ebeme kuyo, uze uphinde umxhentso othe chuu uqhubekeke. Umxhentso obizwa nge mohobelo, wenziwa ngamadoda, kwaye udinga amandla nokungadinwa msinya. Lomxhentso wenziwa kakhulu ngorhatya, ukuzonwabisa.
Imokhibo ngumxhentso owenziwa ngabafazi beguqe ngamadolo, umzimba umana uqubuda uphinda uphakame logama izandla ziphakanyiselwe phezulu. Ikwayara ima emva komgca waba bafazi baxhentsayo, ibe icula iqhwaba nezandla. Imaqekha ngumxhentso okhethekileyo oba yinxalenye yamasiko okuqala enziwa xa amantombazana esiya kwaluka.
AbeSotho bane ndidi ezahlukeneyo zezixhobo zomculo. Imorupa, igubu elincinane elisetyenziswa xa kusoluka amantombazane, lenziwe ngembiza yomdongwe egqunywe ngofele olutsaliweyo. Eligubu libethwa ngempama yesandla ukuze likhale. Ilekoko yona yenziwe ngombhumbhutho osongiweyo wofele lwenkomo, nothi ubethwe ngeentonga, ukhuphe isandi esindumzayo esitsholo ezantsi. Ukusetyenziswa kwesi sixhobo kulungiselelwe phantse imixhentso ye maqekha seances kuphela.
Isixhobo ilesiba senziwe ngeenwele zehashe ezibotshelelwe kwintongana phakathi kwecingo kunye nendawo yokubamba. Ukutsala kancinci ngakweli cingo kwenza ukuba ezi nwele zehashe zingcangcazele, kuphume isandi esizingayo, nesivamise ukulandelwa lilizwi lomdlali. Ithomo yona yenziwe ngomhrubhe, naapho kuye kubotshelelwe iinwele zehashe okanye icingo elibhityileyo.
Kuye kubotshwe ngelinye icingo esiphakathini. Lo mhrubhe udityaniswa nengqayi (okanye kulemihla kuye kusetyenziswe inkonkxa endala yenkcenkce) nesebenza njengekhupha isandi. Esi sixhobo somculo sidlalwa ngokutsala icingo ngesandla okanye ngekhunana elincinci.